Prototype Visual | Prototype fisehoana - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
APPLICATIONS / Fampisehoana sary
Ny maodely fampisehoana dia natao hitodika sy hahatsapa toy ny tena vokatra. Miaraka amin'ny haitao haingam-pandeha prototyping an'ny fanontana 3D, milina CNC, ary famaranana aorian'ny famaranana, mamorona maodely fampisehoana an-tsary avo lenta izay mitovy amin'ny tena vokatra i Creepoto. Ireo modely prototyped ireo dia mety ampiasaina amin'ny vondrona ifantohana, fampisehoana varotra ary hetsika varotra sy marketing hafa.
Mampivarotra ny zavatra noforoninao, ny hevitrao na ny vokatrao
Inona no atao hoe Prototype?
Prototype fampisehoana dia fanehoana an-tsary ny endrik'ilay famolavolana famoronana farany. Ny tanjony dia ny fampirantiana ny maodelin'ny masonao 3D ary hiteraka fahalianana amin'ny mpihaino anao. Tsy mila miasa toy ny maodely miasa izy ireo, fa ianao kosa tsy tianao ho toa marokoroko sy tsy voalamina toa ny maodelin'ny hevitrao. Raha ny maodelin-kevitra dia toy ny sary 3D, ny maodely fampisehoana dia toy ny fandikana 3D azo tsapain-tanana.
Amin'ny tranga sasany, ny prototype fampisehoana dia mila manome fampisehoana miasa ny vokatra. Ity karazana prototype ity dia manambatra ny fiasan'ny vokatra amin'ny endrika ivelany. Azo inoana fa ny fitaovana famokarana kilasy dia hampiasaina handanjalanjana ny fahombiazan'ny vidiny sy ny kalitaon'ny famolavolana. Ity prototype ity dia safidy tsara hanehoana ny fahaizan'ny vokatra alohan'ny famokarana betsaka.
Sarobidy ara-barotra an'ny prototypes fampisehoana sary
Ny maodelin'ny fampisehoana dia azo ampiasaina amin'ny fampisehoana amin'ny mpandray anjara lehibe toa ny mpitarika, ny mpanjifa ary ny mpampiasa vola, na ny mivarotra na ny sary marketing mba hanampiana anao hanome alalana ny vokatrao, na amin'ny fampiroboroboana ny varotra sy ny fikarohana eny an-tsena amin'ireo mety ho mpanjifa.
Na ilaina ny maodely fampisehoana na tsia, miankina amin'ny paikadinao amin'ny varotra, ny endri-vokatra ary ny teti-bola. Tsy ny tetikasa rehetra no manana an'io fitakiana io. Na izany aza, izy ireo dia mety ho fitaovana sarobidy raha ampiasaina amin'ny antonony. Satria ny maodely fampisehoana dia tsy vitan'ny hoe mifanerasera amin'ny mpanjifa amin'ny fanandramana ifantohana, ary azo ampiasaina hiadian-kevitra amin'ireo mpanjifa mety hitranga momba ny vokatra andrasan'izy ireo, hanome anao fotoana hanombanana tsara kokoa ny fihetsik'izy ireo manoloana ny vokatra amin'ny dingana voalohan'ny famolavolana.
Toe-javatra mampiasa maodely fampisehoana matetika
Mahatonga ny fahalianan'ny tsena
Famantarana sy fahazoana ny fotoana mety
Manatsara ny vintana ahazoana antoka famatsiam-bola
Sampana varotra sy varotra
Fanampiana sy fanabeazana
Ny vahaolana tsara indrindra ho an'ireo prototypes fampisehoana an-tsary
Raha ny fizotry ny fivoaran'ny vokatrao dia azo atao alohan'ny na aorian'ny famahana ny antsipirian'ny famolavolana miaraka amin'ny prototype azo ampiasaina. Raha hanao fanatsarana endrika ianao dia mety te hampiasa prototype fisehoana an-tsary miaraka amin'ny ekipa mpamolavola anao taloha, mba hahafahanao mampiditra ny fijerena anatiny ny famolavolana ilay prototype azo ampiasaina. Na izany aza, raha hanao fikarohana eny an-tsena faran'izay haingana ianao, dia azonao atao koa ny mampiseho ireo modely fampisehoana mpampiasa vola na mpanome fahazoan-dàlana mety hananana vokatra miaraka amin'ny endriny ankapobeny.
Na inona na inona ilainao, CreateProto dia afaka manome teknolojia prototype tsara indrindra hanohanana ny orinasanao.
Misafidiana fanontana 3D?
Ny fanontana 3D sy ny fanamboarana aditif dia manome anao safidy isan-karazany mahomby sy haingana prototyping izay afaka mampihena be ny fotoana itarihana sy ny fandaniana amin'ny famokarana maodely fampisehoana tsara indrindra.
CreateProto dia manolotra serivisy fanontana 3D isan-karazany ao anatin'izany ny Stereolithography (SLA) sy ny Selective Laser Sintering (SLS), fomba tsara indrindra hanafainganana ny fizotran'ny fampandrosoana ny vokatrao. Manomboka amin'ny famolavolana CAD ka hatramin'ny ampahany ara-batana eny an-tananao ary farany eo imason'ny ekipanao dia haingana kokoa noho ny hatramin'izay izy io. Manana ekipa injeniera feno sy mpitantana tetik'asa feno izahay izay hiara-miasa aminao hanamarina ny volavolanao, ny bika aman'endrinao ary ny anjara asanao, manampy ny mpampiasa vola sy ny mpanjifa mety hahita tsara ny vokatra eo am-pelatanany alohan'ny handehanany amin'ny tsena.
Sa Prototyping CNC?
Fanohanana farany momba ny famaranana
Te hanana prototypotika kosmetika na prototype voaloko ve ianao? Izahay dia manana ekipa mpanao famaranana prototype tena be fiofanana izay vonona hamadika ny volavolanao ho tena zava-misy. Ny tsirairay amin'izy ireo dia manana fahaizana mitantana tsara amin'ny famokarana prototype avo lenta. Manaraka ny antsipiriany rehetra izy ireo mba hahafahan'ny rehetra mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpanjifa.
Ny famaranana ny lahatsoratra dia hanome sary vaovao ho an'ny prototype fampisehoana milina fotsiny. Ny sampana famaranana tena za-draharaha dia mampiasa famaranana tanana, volavolan-doko, loko miloko, endrika ary famaranana malefaka ary fahaiza-manao manan-talenta ho an'ny fivoriana marina sy ny endrika tsara indrindra.
Mba hanomezana prototype nalaina tahaka haingana toa ny vokatra farany ho an'ny mpanjifa, dia manohana ny fizotran'asa tokana misy fijanonana ho an'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa izahay, ary manolotra fanampiana miampy lanja ho an'ireo mpamolavola vokatra, manampy azy ireo hanatsara ny volavolany ho an'ny fizotran'ny fampandrosoana manokana ny vokatra.
Cnc Prototyping, Prototyping haingana, Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana,